ကျောက်နီမော်ရွာမှမွတ်စလင်ထုအပေါ်ရခိုင်အစွန်း ရောက် များ၏ ယုတ်မာရက်စက်မှု့များ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကျောက်နီမော်ရွာမှမွတ်စလင်ထုအပေါ်ရခိုင်အစွန်း ရောက် များ၏ ယုတ်မာရက်စက်မှု့များ …
ကျောက်နီမော်။ ။၂၈.၅.၂၀၁၂ နေ့ တွင်ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော မသီတာ ထွေးအ သတ်ခံရမှု့ နှင့် ပတ်သက်၍ ကျောက်နီမော်ရွာမှ မွတ်စလင်ထုအား ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစွန်း ရောက်များမှ ဦးဆောင်ပြီး သိက္ခာ၊ သမ္မာဓိအားနည်းသော ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ချို့အား စည်းရုံးကာ အဘက် ဘက်မှ ဒုက္ခပေးနေကြောင်းသိရပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကျောက်နီမော် ကျေးရွာသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး နှစ်ဘက်ရပ်မိရပ်ဖ များနှင့် သက်ဆိုင် သူများအားခေါ် ယူပြီး ၂၀၁၂/၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်အတွင်း မွတ်စလင်ကျောင်းသား ၊ကျောင်း သူများအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ပညာသင်ယူ နိုင်ရန်နှင့် နှစ်ဘက်လူမျိုးစုအတွင်း နဂိုအတိုင်းပုံမှန် ဆက်ဆံ မှု့ပြုကြ ရန် ဂတိ က၀တ်များ တောင်းယူခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သို့သော် မွတ်စလင်ကျောင်းသား များ ကျောင်းတက် ခွင့်ကို ယနေ့အချိန်ထိ ဆရာ၊ဆရာမများ ကိုယ်တိုင် နှေက်ယှက်၊ တားဆီး၊ပိတ်ပင် ထားကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။ (ကျောက်နီမော် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ တစ်ခုတည်းသော အလယ်တန်း၊ အထက် တန်း ကျောင်းမှာ ရခိုင်ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် များနေထိုင်ရာ စံပြကျေးရွာအတွင်း ရှိနေပြီး၊ ဆရာ၊ဆရာမ အများ စုမှာ လည်း ဒေသခံရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။)ယခင်ကျောက်နီမော်ဈေးကြီးအား မွတ်စလင်ရွာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာရွာ (ကျောက်နီမော်မြောက်ပိုင်း၊ ရခိုင်စု) ကြားတွင် တည်ထားပြီး၊ ဇွန်လမှစတင်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား ၎င်းဈေးကြီးအတွင်း သွားရောက် ရောင်းဝယ် ခွင့်ကို ဘုန်းကြီးများနှင့် ရခိုင်အစွန်းရောက်များမှ တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်ပိုင်ဈေးသစ်အား စံပြကျေးရွာအတွင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိမြို့ရွာ အသီးသီး တွင် ရခိုင်အစွန်းရောက် များနှင့် ဘုန်းကြီးတစ်ချို့မှဦးဆောင်ကာ ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်း ဂုဏ်သိ က္ခာကျဆင်းစေရန်ဆောင် ရွက်နေပြီး ကျောက်နီမော်ကျေးရွာ အတွင်း လည်း မွတ်စလင်များ နှင့် အရောင်းအ ၀ယ်ပြုလုပ် သူများအား ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှ သာရေး၊ နာရေးမှ ပယ်လျက်ရှိကြောင်းလဲသိရှိရပါသည်။ အစွန်းရောက်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ဘုန်းကြီးတချို့၏ လူသား မဆန်သော လုပ်ရပ်များကြောင့် လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းများရောင်း ၀ယ်စားသောက်နေ ရသော တော ရွာနေဆင်ရဲသားရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိသားစုများ ဒုက္ခရောက်နေကြပြီး၊ မွတ်စလင် များမှာ လည်း ဆန်နှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များအား ဈေးကြီး ပေး၍ ၀ယ်ယူစားသုံးနေရကြောင်းသိရပါသည်။ကျောက်နီမော်ရွာအတွင်း မွတ်စလင်အများစုမှာ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများဖြစ်ကြပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းကာလအတွင်း ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကို မွတ်စလင်များအားယာယီပိတ်ပင် ထားခဲ့ပြီး ဒီဇင် ဘာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရမှတရားဝင်ပြန်လည်ခွင့်ပြုချက်ချပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ရခိုင်အစွန်းရောက် အုပ်စုမှမွတ်စလင်ရေလုပ်သားများအားပင်လယ်ပြင်ထိ သွားရောက်ကာပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် အန္တရာယ်ပေး နေကြောင်း သိရသည်။ ၂၁.၁၂.၂၀၁၂ (သောကြာနေ့) ညနေ ၄ နာရီအချိန်တွင် ကျောက်နီမော်ရွာမှ မွတ်စလင်ပိုင် ငါးဖမ်းစက်လှေနှစ်စီးအား ဘင်္ဂလားပင် လယ်အော် အတွင်း ငါးဖမ်းနေရင်း မကျည်းကျွန်းမှ ရခိုင်အစွန်းရောက်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဦးလှရွှေပိုင်တန်ကေး(ထိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငါးဖမ်းစက် လှေကြီး) တစ်စီးမှ တိုက်ပြီးနစ်မြုပ်ပြစ်ခဲ့သည့်အပြင်၊ လူ တစ်ချို့အား လည်းသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသိရ ပါသည်။ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်မှာ ကျောက်နီမော်ရွာမှ မွတ်စလင်ပိုင် ငါးဖမ်းစက်လှေငယ်နှစ်စီးသည် (တစ်စီး တွင် ရေလုပ် သားငါးဦးပါ၊ ကျန်တစ်စီးတွင် ရေလုပ်သားလေးဦးပါ၊) မကျည်းကျွန်း အရှေ့ဘက် (သံတွဲ ဆင်ခေါင်း ကျေးရွာနှင့် မကျည်းကျွန်းကြား)ရေမိုင် ၄-၅မိုင်ခန့်အကွာ ၊ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာ အရှေ့ ဘက်ရေမိုင် ၁၀ မိုင်ခန့် အကွာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း ပိုက်မျောနေစဉ် မကျည်းကျွန်းမှ ရခိုင်အစွန်းရောက်ဦးလှရွှေ ပိုင် စက်လှေကြီး (တန်ကေး)သည်တုတ်၊ ဓါးလက်နက်အစုံကိုင်ထားသော လူတစ်စု အားတင်ဆောင်လာကာ ရေ လုပ်သား ငါးယောက်ပါ မွတ်စလင်ပိုင် ငါးဖမ်းစက်လှေငယ်အား စတင်တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်။ ၎င်း ရေလုပ် သားငါးယောက်မှ ရခိုင်အစွန်းရောက်များ၏ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက် ခံနေရစဉ်၊ အခွင့်အရေးရ သည်နှင့် စက်လှေပေါ်မှပင်လယ်ထဲသို့ခုန်ဆင်းသွားကြပြီး ရေစုန်အတိုင်း စက်လှေနှင့်ဝေးရာကို ကူးခတ်ထွက်ပြေးခဲ့ ကြသည်။ ရခိုင်အစွန်းရောက်များမှ ၎င်း ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိထားသော ရေလုပ်သားငါးဦးအားလိုက်လံ တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ၊ မွတ်စလင်လှေပေါ်မှ ပစ္စည်းအား လုံးအား ယူဆောင်သွားပြီး၊လှေခွံအား နစ်မြှပ် ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ရေလုပ်သား လေးဦး ပါအခြားမွတ်စလင်လှေအားလည်းအလားတူသွား ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
ပထမအတိုက်ခံရသော ငါးဖမ်းစက်လှေမှ ရေလုပ်သား မွတ်စလင်ငါးဦးမှာ ဒဏ်ရာ များစွာဖြင့် ပင်လယ်ပြင် တွင် နာရီပေါင်းများစွာ မျောပါနေစဉ်၊ သံတွဲမြို့နယ် ဆင်ခေါင်းကျေးရွာမှ ငါးဖမ်းလှေတစ်စီး မှတွေ့ရှိ၍ ကယ်တင်လာမှု့ကြောင့် အသက်ဘေးမှ လွတ်ကင်းခဲ့သည်။ဒုတိယမြောက်အတိုက်ခံ ရသောလှေမှ ရေလုပ် သားလေးဦးမှာ ယခုအချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရှိရသည်။ ပင်လယ်ပြင်အတွေ့ အကြုံရင့် ကျက်သောရေ လုပ်သားများမှ ၎င်းရေလုပ်သားလေးဦးမှာ အသက်ရှင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေး အလွန် နည်းပါးကြောင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ ရသောကြောင့် သတ်ဖြတ်ခံရပြီဖြစ်ဟုယုံကြည် ကြောင်း ဟုပြောသည်။
ပျောက်ဆုံးနေသော ကျောက်နီမော်ရွာမှ မွတ်စလင်ရေလုပ်သား လေးဦးမှာ ဦးမောင်လှ၊ ဦးရွှေလှ၊ ဦးလူလှ ညီအစ်ကိုသုံးဦးနှင့် ဦးဘော်ရှော တို့ဖြစ်ကြသည်။ အသက်ဘေးမှ လွတ်ကင်းလာသူများမှ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား တိုင်ကြားထားသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ သွားရောက်အရေး ယူခြင်း မ ရှိ သေးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
This entry was posted on December 24, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Abdullah bin Zayed gets messages dealing with Rohingya Muslim minority in Myanmar
ICC က လက်ခံကိုင်တွယ်နိုင်သည့် ရာဇဝတ်ပြစ်မှုအမျိုးအစားများ၊ →